Binance ezube ewu ụlọ ọrụ dị na Channel Islands
Mgbe na-adịbeghị anya ewu ihe ụlọ ọrụ dị na Malta, kasị mgbanwe na ụwa site trading olu, Binance, kpebiri iji na-emeghe ọzọ ụlọ ọrụ, a na Channel Islands (Jersey agwaetiti, n'etiti UK na France), enye ya ọzọ mgbanwe maka ọrụ n'ime UK na European ahịa
"Global mgbasa atụmatụ… -etolite a ike arụmọrụ ntọala maka anyị mgbasa n'ime ndị ọzọ nke Europe "Binance CEO Zhao Changpeng kwuru.
The mba nwere mma nzuzo na tax ọnọdụ maka ulo oru na chọrọ ka ha ego akaụntụ e. Binance ga-akwụ a 10% tax na ya ego.
Coinbase malite kaadị index ego
Kaadị ibu Coinbase mara ọkwa na ya cryptocurrency index ego, mbụ kpughere na March, bụ ugbu a na-emeghe ka investors na US.
The ụlọ ọrụ kwuru na a blog post na ọ hụrụ "akarị" mmasị site investors, na ugbu a, ọ na-agbalị iru eru ka ndị na-achọ itinye ego n'etiti $250,000 na $20 nde. Maka ugbu a, ụlọ ọrụ kwuru, na-ekere òkè na-ejedebeghị na U.S. na ndị na-accredited investors.
Coinbase Index Fund enye investors n'ebe niile akụ depụtara na mgbanwe, dara nha site ahịa capitalization.
Coinbase kwuru na ọ na-arụ ọrụ ẹkedori ọzọ ego na-"inweta niile investors na-ekpuchi a nabatara umu nso nke digital akụ" ka, ma ọ bụrụ na ị bụghị ihe accredited U.S. ọṅụ, e nwere ike inwe ohere maka ị dabere na ihe na-abịa na-esote.
Zug anwale Blockchain ikpebi na ezimezi oku na digital NJ
The obodo nke Zug, n'ụlọ nke Swiss Cryptotal, na-agwa ndị bi na ya na-ibuo blockchain votu. Ha na-atụ anya agbanweta echiche dị iche iche okwu nke obodo mkpa, tinyere ezimezi oku n'oge kwa afọ Lakeside Festival na ojiji nke digital gafee gbaziri akwụkwọ na-akwụ na-adọba ụgbọala ụgwọ.
Kraken Daily Market Report maka 12.06.2018
$197M ahịa gafee ahịa niile taa
Bitcoin ndorodoro Ripple ...